विज्ञ अर्थशास्त्रीले सेयर बजारलाई अनुत्पादक हो भन्न सक्दैनः नीरव पुडासैनीको विश्लेषण « Clickmandu
विज्ञ अर्थशास्त्रीले सेयर बजारलाई अनुत्पादक हो भन्न सक्दैनः नीरव पुडासैनीको विश्लेषण
प्रकाशित मिति : २० फाल्गुन २०७४, आईतवार १०:०९
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको हालैको शेयर बजार बारेको अभिव्यक्ति संसयात्मक रुपमा बुझिन खोजेको देखियो । बैंकिङ क्षेत्रले शेयर बजारमा गर्ने गरेको लगानी उत्पादक हो, होइन वा उचित हो, होइन भन्ने कुरा बहसको विषय हुन सक्ला । तर स्वयं शेयर बजारलाई नै अनुत्पादक भनियो भनेर मूर्खतापूर्ण तरिकाले भ्रम छर्न खोजिँदैछ ।
डा. खतिवडाको हिँजोको र आजको उद्देश्यमा कुनै तात्विक भिन्नता छैन । हिजो गर्भनर हुँदा पनि उनको अभिव्यक्ति बिचौलिया प्रवृत्तिका शेयर तथा घर जग्गा माफियालाई लक्षित थियो । आज मन्त्री हुँदा पनि उस्तै छ । यसैको फलस्वरुप उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले बुम¥याङ गर्ने असफल प्रयास गरिँदैछ । अनुत्पादक भन्नुमा तर्क छ । बैंकले दिने शेयर कर्जाले पक्कै पनि उत्पादकत्व बढाउँदैन । तर यसको अर्थ समग्र पूँजी बजारलाई उनले पक्कै पनि अनुत्पादक भनेका होइनन् ।
पूँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थाको ज्ञान लिन सर्वप्रथम त्यस देशको पूँजी बजारको अवस्था र कारोबारको जानकारी लिन जरुरी हुन्छ । अहिलेको बजार परिसूचक हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्थाभन्दा कहाँ फरक छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा वैदेशिक लगानीको महत्वलाई बुझेका अर्थमन्त्रीले यस्ता अभिव्यक्ति दिए भनेर रोइलो गर्नु खेदजनक छ ।
अर्थतन्त्र खुम्चिएको आजको अवस्थामा बैंकको लगानी योग्य ऋणको व्याजमा वृद्धि भएको छ । रोजगारीमा थप अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । व्यापार घाटाका कारण विप्रेषणको आडमा भित्रिएको विदेशी मुद्रा व्यापार घाटाका कारण बाहिरिइरहेको छ । पूँजी वृद्धिका साथ आएका बैंकले थप पूँजीको प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । शेयरको आपूर्ति मागको तुलनामा बढी देखिन्छ । लगानी कोषलगायतका संस्थागत लगानीकर्ताहरु शेयर बजारको कारोबारमा पर्ख र हेरको सिद्धान्तमा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा शेयरको मूल्य वृद्धि हुनुमा कुनै तुक छ र ?
एउटा विवेकी लगानीकर्ताले शेयरको मूल्यमा होइन त्यसको आर्थिक अवस्थाको आधारमा लगानी गर्नुपर्छ । यस्ता बेतुकका हौवाका पछि नलागौ । शेयर कारोबार भविस्यमा मर्यादित हुने निश्चित छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीका अभिव्यक्तिले यसलाई थप पुस्टि गरिसकेको छ । तर्सथ हौवाको होइन, बिवेकको प्रयोग गरौ ।
तसर्थ विभिन्न परियोजनाहरुका आवश्यक थप पूँजी जुटाउने महत्वपूर्ण औजार पूँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ज्ञाता अर्थमन्त्रीले यस्तो भने भनेर रोइलो गर्नुमा कुनै अर्थ छैन । कतै वाम सरकार र उनको यो अभिव्यक्तिको गलत बुझाईलाई हौवा बनाएर सट्टेवाजहरु ठूलै चलखेल गर्न उद्यत् त छैनन् ? शेयर बजारको कारोबारमा स्पेकुलेशनको ठूलो हिस्सा रहेको हुन्छ । म्यानुपुलेशन गर्दै स्पेकुलेशन गर्न खप्पिस शेयर सट्टेबाजहरु यस्ता हौवालाई थप हावा दिन सँधै तत्पर हुन्छन् ।
तर अर्थमन्त्रीले हालै भन्सार तथा कर प्रशासनलाई चुस्त गर्न, मूल्य भन्दा कम भन्सार मूल्यांकन नगर्न नगराउन कडा निर्देशन दिए । जसको चर्चा गर्न उनीहरुलाई आवश्यक लागेन । जसको सकारात्मक प्रभाव तत्काल देखियो । राजस्व वृद्धि अहिलेसम्मकै उच्च भयो । यो पनि सुरुवाती संकेत हो । वाम सरकार र अर्थमन्त्री स्वयम्लाई असफल हुने सुविधा यो पटक छैन । तसर्थ नेपाली अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा उनको कामको अहिल्यै शंसय वा शंका गर्ने सुविधाको उपयोग गर्न हामी हतारिनु उचित हुँदैन ।
अर्थतन्त्रको सुधारका लागि उनले गर्ने दिग्दर्शनको मार्गलाई पछ्याँउदै पूँजी बजारमा कारोबार गर्नुको विकल्प छैन । उनको उद्देश्य अनुरुपको अर्थतन्त्रले गति लिन थालेसँगै पूँजीबजारले फेरी त्यो लयलाई समाउनेछ । उनको डर विदेशी लगानीको नाममा भित्रने पूँजी, बैंकमार्फत् शेयर बजार र जमिनको उत्पादकत्व मासिने गरी गरिने घर जग्गाको स्पेकुलेशनमा नआओस् भन्ने मात्रै हो । वाम सरकारको हौवामा घटेको यस बजारका लगानीकर्ताले शेयर बजारको अंक सधै स्थिर हुँदैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । बजारमा शेयरको आपूर्ति बढेको छ, तुलनात्मक रुपमा माग कम छ । पूँजी बजारमा गरिने ठूलो लगानीको अभाव अहिले छ । संसथागत लगानीकर्ता तथा शेयर कारोबारी लगानीकोषहरुले थोरै नाफामा शेयर बेचिरहेका छन् ।
सुविधामा खरिद गर्ने मौका पाएका यस्ता सामूहिक लगानी कोषहरुलाई प्राथमिक शेयर बेच्न पाउने निश्चित समयसीमा तोकिनु आवश्यक छ । डा. खतिवडाले शेयर बजारबाट वस्तु उत्पादनको जस्तो प्रतिफलको अपेक्षा पक्कै गरेका होइनन् । उत्पादकत्वको अर्थ वस्तु उत्पादन मात्र कदापी होइन । पूँजीको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधिहरुको वृद्धि आदि पनि यस्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
उनको आशय विभिन्न क्षेत्रहरुबाट बैंकमा भित्रिएको पूँजी ऋणको माध्यमबाट अनुत्पादक रुपमा स्पेकुलेशनको उद्देश्यका साथ शेयर बजारमा भित्र्नु उत्पादकत्व होइन । अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा रहेको पूँजी बजारमा देशको अर्थतन्त्र, सम्बन्धित संस्थाको प्रतिफल तथा उनीहरुको वासलात आदिको आधारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । अर्थमन्त्री यस्ता लगानीकर्तामैत्री छन् भन्दा अन्यथा नहोला । उनको उद्देश्य शेयर बजारको आडमा बैंकको पूँजीलाई दाऊमा लगाउने सट्टेवाजहरुप्रति लक्षित छ ।
ती अंकको वृद्धि सँगै हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरले दोहोरो अंकको उचाई समाउनेछ । यसको प्रयत्नमा लाग्नु अबको अर्थमन्त्रीको पहिलो काम हुनेछ । जसका लागि उनले राज्यका सबै आर्थिक चुहावटलाई बन्द गर्ने प्रयास गर्नेछन् । फलस्वरुप धेरै बिचौलिया तथा सट्ट्वाजहरु रुस्ट हुनेछन् । र, बजारमा भ्रामक हौवाहरु फैलाउने प्रयास गर्नेछन् । यसलाई त्यसैको एउटा कडी हो भन्दा अन्यथा हुँदैन ।
राम्रो क्षेत्र तथा संस्थामा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरु केही समय घोडा बेचेर सुत्नु जस्तै सुत्नु उत्तम हुन्छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य जसरी क्रमशः पूरा हुँदै जान्छ । उसैगरी पूँजीबजारको अंकहरुले पनि उचाई लिँदै जानेछ । शेयर बजारको लगानी भनेको नै तत्कालको नाफाका लागि गरिने लगानी होइन । अर्थतन्त्रको दर्पण शेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेर एउटा विज्ञ अर्थशास्त्रीले कदापी भन्दैन । डा. खतिवडाको अभिव्यक्तिलाई यसरी नै बुझ्न जरुरी छ । तर्सथ सम्बिन्धत संस्थाको शेयरमा कारोबार गर्नुभन्दा अगाडि त्यस संस्थाको सम्पूर्ण आर्थिक विवरणको अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नु उत्तम हुन्छ । तिनको प्रतिफलको आधारमा तत् संस्थाहरुको शेयर मूल्यमा परिवर्तन हुन्छ ।
लेखक नेपाली पुँजी बजारका जानकार हुन् ।
प्रविधिको प्रयोगले निम्त्याएको ‘नेचर डेफिसीट डिसअर्डर’बाट यसरी हुँदैछौं शिकार
विश्वमै नयाँ समस्याकारुपमा देखिएको ‘नेचर डेफिसीट डिसअर्डर’ के हो भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुअघि तपाईंलाई मेरो
अहिलेको समस्या तरलता अभावको होइन ‘क्रेडिट क्रञ्च’को हो, जसले अर्थतन्त्रलाई असर पार्छ
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रका लागि ब्याजदर एउटा प्रमुख सुचांक हो । ब्याजदरलाई अर्थतन्त्रको ऐनाकारुपमा पनि